Release Date: 2017, 25 June
Filimka Tubelight ayaa ah mid si weyn loo sugayo waxaanan maanta kusoo dhacaya dhamaan taageeraha sida daran usagaya filimkan warar murugadooda wata kuwaas oo ah in filimku ku guul daraystay in uu helo maanta shahaadada waqtiyeynta taas oo ah shahaado kasoo baxayda guddiga tafaftira aflaamta siiyana ogolaanshah shaacinta iyo sidoo kale iclaaminta xilliga filimkaasi uu soo fuulayo masraxa shaneemooyinka India.
Maadaama oo uusan helin Tubelight shahaadadiisa waqtiyeynta arimaha dhici kara ayaa waxa ugu weyn in uu waayo masraxa shaneemooyinka xiligii ay madaxdiisu ugu talo galeen ee ahaa maalinta laga Iidayo India waxayna arintaani keeni kartaa khatar dhaqaale iyo mid kaalinba.
Filimka ayaa loo iclaamiyey in uu soo baxo taariikhdu markay kubeegan tahay bisha June 23deeda taaso micnaheedu yahay waxay haystaan madaxdiisu 8deed maalmood oo kaliya in ay kusoo helaan shahaado sida iidinka muuqatana waa waqti aad iyo aad ciriiri u ah balse waa hubaal wax walba in ay kasii fikireen madaxdu si deg degana ay ku heli doonaan shahaadadaas.
Ma ogtahay in qof ugu horeeya ee daawan doono filimka Salman Khan ee Tubelight uusan ahay qof hindi ah?
Maxad kala socota 5tii arimood ee loogu hadal hayska badnaa India Asbuuci lasoo dhaafay?–Ka ogow halkan